Réponses pour «faritra»:
Total: 37 résultats - 0.082 secondes
Faritra : ... Faritra : ... Faritra :
Io karazany io koa no nofidianan’ny mpamboly izay nanatrika ny hisian’ny tantsaha mpamokatra masomboly ovy sy hanana karazana tena mety amin’ny faritra iray.
reglement radios 2016 VM 85%
Radio 4 no hofantenana ho an’ireo faritra 6 voakasiky ny tetikasa (faritany 6) ary 4 kosa ho an’ny faritra Vakinankaratra.
Reglement concours mariage des enfants VM 83%
FORMULAIRE TOSIKART 81%
Faritra / Région : ... Faritra / Région : Distrika / District :
Bulletin Mensuel Tresor N37 76%
Raha ho an’i Bongolava, ohatra, talohan’ny taona 2008, fony mbola Perception Principale no nisy teto, dia sampandraharahan’ny Tahirimbolam-panjakana tany amin’ny faritra hafa no nitantana ny kaotim-bolan’ny Faritra.
dany .24 75%
Nolazainy sy nekény ho nozakain’ny vahίny ny Faritra Avaratr’i Madagasikara na Diégo-Suarez na Antsiranana.
fiche pcd fr mg CMP fianar 75%
Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana 73%
FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY PENIELA 65%
FOTOAM-PANOMPOANA TSY MIOVA ETO AMIN’NY FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY PENIELA ORA ALATSINAINY TALATA ALAROBIA ALAKAMISY ZOMA 6-7 MASOANDRO MIPOSAKA MASOANDRO MIPOSAKA MASOANDRO MIPOSAKA MASOANDRO MIPOSAKA MASOANDRO MIPOSAKA 7-8 SABOTSY ALAHADY 6H30 FIANARAN’NY MPIANDRY FIDIRANA VOALOHANY FIANARANA SORATRA MASINA SEKOLY ALAHADY VEHIVAVY KRISTIANA MPIANDRY RAHARAHA MPIANDRY RAHARAHA MPIANDRY RAHARAHA MPIANDRY RAHARAHA 8-9 9-10 9H30 INVITE DU ZOMA FIANARAN’NY MPIOMANA HO MPIANDRY 10-11 FIFADIAN-KANINA 11-12 12-14 MPIANDRY RAHARAHA FIFADIAN-KANINA MPIANDRY RAHARAHA FIDIRANA FAHAROA MPIANDRY RAHARAHA MPIANDRY RAHARAHA 14-16 FOTOAMPIFOHAZANA FOTOAMPIFOHAZANA MPIANDRY RAHARAHA 16-17 18-19H30 MPIANDRY RAHARAHA MPIANDRY RAHARAHA 17-18 VONDROM-BAVAKY NY Faritra faha III FIVORIAN’NY SAMPANA ZOMA-PIDERANA 17H-18H30
affiche. vmpub 65%
imprimeé AFFILIATION VMF 64%
………………………..………… Faritra/ Région :
Mahenika faritra toa inona ny mpikambana vao mahazo fankatoavana ny antoko ?
Ndao hilalao 1 61%
Eto koa dia tsy maintsy hay tsara aloha ny lalao sy ny faritra ilalaovana alohan’ny hanazavana ny 3 lalao.
46 FANAOVANA “PLAN REGULIER” :...................................................................................47 FITSIRIHANA NY TOERANA.............................................................................................47 FANATSATOHAM-BATO (BORNAGE).............................................................................48 PLOF (PLAN LOCAL D’OCCUPATION FONCIÈRE).....................................................48 FANGATAHANA SARI-TANY.............................................................................................49 FANGATAHANA FANAVAHANA AMPAHAN-TANY AO ANATIN’NY TANY LEHIBE IRAY (PROJET DE MORCELLEMENT ET LOTISSEMENT)........................49 FANGATAHANA FAMERENANA TSATO-BATO SY FARITRA (RÉTABLISSEMENT DE BORNE)........................................................................................49 FANANAN-TANY, INONA NO TOKONY HO FANTATRA?
IM9- version malgache 57%
Nandao an’i Madagasikara izy mivady ny 27 Desambra 2015 ary mipetraka any Maurice aloha hatramin’ny Jiona 2016, fotoana hahataperan’ny andraikitra maha-Solontenan’ny Faritra ao amin’ny Ranomasim-be Oseanina Indianina an’i Nathalie.
LESONA 4 55%
Araka ny efa voalaza tany amin’ny lesona voalohany dia ny faritra midina any ambany tsipika rehetra dia esorina avokoa.
Bulletin Mensuel Tresor N38 50%
Ny PGA no voahosotra ho tompon-daka P.16 AKON’NY FARITRA:
Colloque Histoire et Civilisation du Sud et Ouest de Madagascar 50%
Ny anjara toeran'ny fandinihana ny teny eo amin'ny famantarana ny tantaran'ny faritra atsimo andrefan'i Madagasikara.
LAHARANA 188 50%
Natolotra tamim-pitiavana ho an’ny Filoha sy Biraon’ ny Stk Zandriny àry ny vokatry ny fo, ny « ezaka duplicopieur », avy tamin’ny Fiangonana reniny, avy tamin’ny mpamaky any am-pitan’ny ranomasina, ny avy tamin’ny Tokantrano Sakaizan’ ny Stk Zandriny, ny avy tamin’ny mpianakavy eto an-toerana sy any amin’ny faritra, ny avy tamin’ny mpikambana ato amin’ny Stk Zandriny.